२८ बर्सिया सोमिका तामाङले जनमाईन ५ बच्चा – Life Nepali
२८ बर्सिया सोमिका तामाङले जनमाईन ५ बच्चा
नुवाकोटकी २८ वर्षकी सोमिका तामाङले सोमबार विहान पाँच शिशुलाई जन्म दिएकी छिन् । थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति गृहमा शल्यक्रियामार्फत सुत्केरी भएकी तामाङले चार जीवित र एक जना मृ’त शिशुलाई ज’न्म दिएकी हुन् । मृतक शिशु छोरा हुन् भने अन्य चार जना छोरी भएको अप्रेशन टोलीका प्रमुख डा. कीर्तिपाल सुवेदीले जनकारी दिए । एक जना शिशुलाई एनआईसीयूमा राखेको भए पनि र तीन जनालाई आमाको जिम्मा लगाइसकेको डा. सुवेदीले बताए ।***याे समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल डबल क्लिक गर्नुहोस*****,
एक जना शिशुलाई एनआईसीयूमा राखे पनि अक्सिजन दिन नपरेको उनले बताए । एनआईसीयूमा राखेको बच्चाको तौल आठ सय ग्राम छ भने अन्य तीन जनाको तौल क्रमश १.८, १.९, १.६ ग्राम रहेको छ । तामाङले नियमित रुपमा प्रसूति गृहमा गर्भ जाँच गराउँदै आएकी थिइन् । ‘उहाँ २८ हप्तामा नियमित परीक्षण गर्न आउँदा एक जना बच्चा गर्भमै मृत्यु भएको पाएका थियौँ । तर, चार जना बच्चा सकुशल नै भएकाले हामीले निगरानीमा राखेका थियौँ’, अस्पतालकी निर्देशक डा. संगीता मिश्राले भनिन् ।***याे समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल डबल क्लिक गर्नुहोस*****,
गर्भवतीको पेटमै पानीको फोका फुटेपछि सोमबार विहान शल्यक्रियामार्फत सुत्केरी गराउनु परेको हो । डा. कीर्तिपाल नेतृत्वमा छ जना चिकित्सकको टोलीले सोमिकाको अप्रेशन गरेको हो । डा. सुवेदीले भने, ‘हामीले अप्रेशनको बेला केही जटिलता आउला कि भनेर सचेत थियौँ । तर, त्यस्तो कुनै कम्प्लिकेसन आएन ।’ चार जनासम्मको बच्चा सामान्यतया जन्मिराख्ने भए पनि त्यसभन्दा माथिको बच्चा जन्माउनु भने दुर्लभ केश भएको डा. मिश्राले बताइन् ।***याे समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल डबल क्लिक गर्नुहोस*****,
Previous चियावालि पछि यति सुन्दरी पेन्टिङवालि एकाएक भाइरल, यस्तो छ मनै रुवाउने कथा (हेर्नुहोस् भिडियो )
Next कैलाली कार दुर्घटनाः मृतक युवतीको पहिचान भएन, घाइते युवक आईसीयूमा